बोकरी पनीरको साथ आलु मिलफुइल - थर्मोमिक्स रेसिपीज ThermoRecines
बाख्रा पनीरको साथ आलु मिलफेल
CARNES43 मिनेट4 व्यक्ति
कस्तो स्वादिष्ट पकवान! र गर्न सजिलो। बाहिर जान्छ मलाई एक टन दिइएको छ patatas र म खर्च गर्न बिभिन्न व्यंजनहरु बारे सोचिरहेको छु ... र यो बाहिर आयो।
यो वास्तवमा आलु र मासु तह लगाउने र केही स्लाइसहरू थप्दै मात्र हो बाख्राको चिज। तर यो संयोजन यति धनी छ कि यो एक थियो कुल सफलता।
र सबै भन्दा राम्रो कुरा, कि एक दिन देखि अर्को सम्म यो उत्कृष्ट रहन्छ, यदि तपाईं म जस्तै हुनुहुन्छ र लगाउनुहोस् काम गर्न tupper, यो नुस्खा शानदार छ। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ!
1 बाख्रा पनीरको साथ आलु मिलफेल
तपाईंलाई मनपर्ने स्वादहरूको संयोजनको साथ एक सरल नुस्खा।
250 ग्रामको मासुको मासु (म सुँगुर र मासु मिलाउन मन पराउँछु)
ओरेगानो वा तुलसी
फ्राइड टमाटर सासको large ठूला चम्मच
मासु वा तरकारी ब्रोथ को 150 ग्राम
100 सेतो वाइन को छ g
लगभग 1 औंला बाक्लो स्लाइसहरूमा आलु छील्नुहोस् र काट्नुहोस्। हामी स्लाइसहरू भारोमा कन्टेनरमा र भारोमा ट्रेमा स्टीमबाट बाहिर निस्कन सजिलो बनाउन प्वालहरू छोड्ने प्रयास गर्दैछौं। हामी नमक र रिजर्व थप्छौं।
हामीले गिलासमा तेल, प्याज र लसुन राख्यौं र कुच्यौं Seconds० सेकेन्ड, गति 10।
हामी spatula र कार्यक्रम संग गिलास को भित्तेहरु मा रहेको छ कि अवशेषहरु तल Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
बदामाको मासु (स्प्याटुलाको साथ राम्रोसँग हल्लाउँदै ताकि मांसले केक नपरोस्), मसला र नुन थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो, चम्चाको गति।
त्यसो भए हामी रक्सी र कार्यक्रम थप्छौं २ मिनेट, भेरोमा तापमान, काउन्टरक्लवर्क, चम्चा गति। हामीले माथि भेरोमा कन्टेनर राख्यौं।
अर्को हामी मासु शोरबा र कार्यक्रम थप्नुहोस् २ मिनेट, भेरोमा तापमान, काउन्टरक्लवर्क, चम्चा गति.
हामीले वरोमा कन्टेनरलाई माथि राख्यौं।
जब त्यहाँ5मिनेट बाँकी छ, भुटेको टमाटर थप्नुहोस्।
यदि सॉस थोरै तरल छ भने, हामी लगभग more थप मिनेटहरू, समान गति र तापक्रममा। हामी नुन सुधार गर्दछौं।
हामी ओवनलाई 180º मा तातो माथि र तलको साथ पूर्व तताउँछौं। कन्टेनरको तल मा मार्जरीन फैलाउनुहोस् जहाँ हामी मिलिफेउइल पकाउन जाँदैछौं।
हामीले आलुको 1/3 तल राख्छौं, हामी मासुले ढाक्छौं।
हामी शीर्षमा आलु र मासुको 1/3 राख्न फर्कन्छौं।
हामी आलु को अन्तिम 1/3 संग आवरण।
समाप्त गर्न, हामी माथि बाख्रा रोल को टुक्रा राख्छौं।
हामीले १० मिनेट ओभनमा राख्यौं। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई केहि मिनेट अन्त मा ग्रिल गर्न सक्नुहुन्छ।
थप जानकारी - Zucchini, मशरूम र बाख्रा पनीर cannelloni
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: CARNES, Celiac, सजिलो, अण्डो असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम, वरोमा रेसिपीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » CARNES » बाख्रा पनीरको साथ आलु मिलफेल
हे भगवान, यो नुस्खा जस्तो देखिन्छ, आलु जहिले पनि विजय, म यो नुस्खा लेख्छु, तपाईंको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद। अभिवादन।
धन्यवाद भेरोनिका। सत्य यो हो कि यो महान छ। मैले कामको लागि टुपरवेयर लिएँ र मेरा साथीहरूले यसलाई खाए, म तपाईंलाई अझ बढी कुरा गर्ने छैन !!
यो राम्रो देखिन्छ।
तपाईं मासु ब्रोथको बराबर जान्न चाहानुहुन्छ यदि मैले अवेक्रिम गोली (वा जमिन मालिक, हाहा
कहिलेकाँही म तपाइँका रेसिपीहरू देख्छु जसले ब्रोथको X मिलि राख्दछ, र मलाई ती गोलीहरू कसरी गर्ने भनेर थाहा छैन
धेरै धन्यवाद र प्रोत्साहन, एक प्रभावशाली ब्लग !!!!
मारियोएसबीएमलाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक छ, २ gr० ग्रानको मासु र १ 250० मिली पानीको लागि मैले १/२ अभेक्रिम गोली राख्छु। यस अवस्थामा, म अधिक राख्न सक्दिन किनकि यसमा फ्राइड गरिएको टमाटर छ, जुनसँग पहिले नै आफ्नै नुन छ। जे भए पनि, छोटो रहन र थोरै नुन संग सुधार गर्न को लागी राम्रो हुन्छ। यदि हामीले प्राकृतिक कुचाइएको टमाटर प्रयोग गर्‍यौं भने हामी त्यसमा थोरै अवेक्रिम राख्न सक्छौं। तर मलाई फ्राइड गरिएको टमाटर प्रयोग गर्न मन पर्छ किनकि यो 150 चम्मच मात्र हो र यसमा बढी स्थिरता छ र यसले थप स्वाद दिन्छ। तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ !!
त्यसो भए, १ meat० मिलीलीटर मासु ब्रोथ राख्न, म आभ पक्रको आधा गोली प्रतिस्थापन गर्छु, तर म १ 150० लिटर पानी थप्छु, हैन? त्यसोभए मासु, किन्न मासु को २ gr० ग्रान, अलग जान्छ, ठीक छ?
Just! तपाईंले १ 150० मिलीलीटर पानी हालिदिनुभयो र तपाईं एभक्रिमको १/२ गोली विघटन गर्नुभयो (म पानीलाई माइक्रोवेभमा वा आगोमा तताउँछु र जब यो उमालेको हुन्छ म यसमा गोली खान्छु, राम्रोसँग हल्लाउनुहोस् र भोईला! ध्यान केन्द्रित मांस ब्रोथ)। र, निस्सन्देह, मासु अलग जान्छ। तपाईंले पहिले यसलाई खैरो बनाउनु पर्छ, वाइन थप्नुहोस् र त्यसपछि तपाईंको एभ्रेम ब्रोथ थप्नुहोस्।
तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ कि यी आलुहरू तपाईंको लागि कसरी बाहिर जान्छन्!
इरेन, मासुको ब्रोथ स्पष्ट पार्नु भएकोमा धन्यवाद ... म यो तरीका कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नको लागि यो बनाउने छु
नमस्ते माइटे, तपाई हामीलाई बताउनु हुन्छ। सायद मेरी लॉरेको टिप्पणीले तपाइँलाई तपाइँको मात्रा र समय परिमार्जन गर्न मद्दत गर्दछ। धन्यवाद!
नमस्कार, मैले यो बत्ती शुक्रबार देखेको थिएँ र मैले यो साताको अन्त्यमा यो खाना बनाएको थिएँ जब खाना खाने पाहुनाहरू पाउँथे, यो एकदमै स्वादिष्ट थियो, र प्रस्तुतीकरण एकदमै सुन्दर थियो, यो तयार गर्न एकदम छिटो र सजिलो छ, यद्यपि मैले यसलाई १०० मिलि क्रीम बनाएको हुँ। खाना पकाउनु।
धेरै राम्रो नुस्खा !!!
नमस्ते नाओमी, कत्ति राम्रो छ तपाईंले मनपराउनु भयो !! क्रीमको १०० मिलीलीटरको बारेमा धेरै राम्रा, उनीहरू पक्का थिए कि उनी महान थिए। र तपाईको अनुभवको बारे हामीलाई बताउनुभएकोमा र धेरै जसो हामीलाई दिनहुँ पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद।
मारी लरे भन्यो
यो विधि स्वादिष्ट छ, तर म टिप्पणी गर्न चाहन्छु कि संकेत गरिएको मात्रा people व्यक्तिको लागि अपर्याप्त देखिन्छ, व्यक्तिगत रूपमा मैले potatoes आलु र grams०० ग्राम मासु राख्छु र अर्कोतर्फ मलाई आलुहरूको लागि थप खाना पकाउने अभाव हुन्छ जुन मेरो स्वादको लागि थियो। थोरै गाह्रो।
मारी लरेलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मारी लाउर,
तपाईको टिप्पणी को लागी धेरै धन्यबाद, ताकि हामी परिमाणहरु बढाउन सक्दछौं। आलु को पकाउने को रूप मा, यो आलु को प्रकार र स्लाइस को मोटाई मा निर्भर गर्दछ, त्यसैले यो सबैको लागि काम गर्दछ कि समय भन्न गाह्रो छ। तर हे, तिनीहरू चुलोमा भिज्न सकिन्छ र कडा छ भने केहि लामो बाँकी। वा हामी तिनीहरूको पोइन्ट पनि जाँच गर्न सक्दछौं जब तिनीहरू वरोमामा समाप्त हुन्छन् र हामी अधिक वा कम ओभन समय गणना गर्न सक्छौं। म खुशी छु कि तपाईलाई यो मन पर्यो।
मैले गत हप्ता यो नुस्खा बनाएँ र मनपर्‍यो। जब यो people व्यक्तिको लागि हो मैले 5०० ग्राम मासु राखें र राम्रो भागहरू बाहिर आयो। मेरो घरमा उनीहरूले मलाई दोहोर्याइसकेका छन्।
नमस्कार सुसाना, कस्तो खुसी! मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि तपाईंलाई यो धेरै मनपर्‍यो। मलाई विशेष गरी मलाई यो मनपर्‍यो कि मलाई वास्तवमा मनपर्दछ। चुम्बनहरू।
मैले हिजो र स्वादिष्ट गरेँ !!!! मैले यसलाई अलि परिमार्जन गरे किनकी ममा सेतो दाखमद्य थिएन, त्यसैले १०० मिलि सेतो वाइनको सट्टामा, मैले 100० एमएल रातो र ml० मिलीलीटर पानी राखें। मैले नुन थप्न सकेन किनकि अभेक्रिम ब्रोथको साथ मलाई लाग्थ्यो यो पर्याप्त र बिंगो हुनेछ!
क्रिस्टिना, कस्तो रमाइलो! राम्रो अनुकूलन, मलाई यो मनपर्‍यो। यो एक डिश हो जुन म मनपराउँछु र म प्राय: बनाउँछु। धन्यबाद!
मैले यसलाई अभ्यासमा प्रयोग गरीरहेको थिएँ, हेराईको साथ, तपाई काममा तल झर्ने लामो समयसम्म पर्खन सक्नुहुन्न, छोटकरीमा भन्नुपर्दा, म मात्र भन्न सक्छु कि यो अति उत्तम थियो। प्रत्येक एक अर्को धेरै राम्रो को लागी धेरै व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद।
नमस्ते Lourdes, कस्तो खुशी। सत्य यो हो कि यो एक शानदार नुस्खा हो, धन्यवाद!
यस विधिमा मेरो प्रश्न छ
गाढा ब्रोथ… .क तपाईं राख्नुहुन्छ… १g० ग्राम अभेक्रिन गोली… वा १g० ग्राम पानी भ्याभ्रेन गोलीमा विघटन हुन्छ? म यसको बारेमा स्पष्ट छैन र म यो नुस्खा बनाउन चाहन्छु
माइटलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मेट! तिनीहरू १ 150० ग्राम पानी हुन् जसमा तपाईं अभेक्रिमको १/२ गोली विघटन गर्नुहुन्छ। यदि हामीले १ grams० ग्राम अभेक्रिम गोलीहरू राख्यौं भने, हामी यसलाई नुनिलो रूपमा खान सक्नेछैनौं। तपाईं देख्नुहुनेछ नुस्खा कति मीठो!
हेलो !!! म यो प्रक्रियामा मात्र यो प्रक्रिया राख्छु !!!!! म यो राम्रो आशा गर्छु ... अर्को दिन म अझ बढी खाना लिन्छु ... आईटीले मलाई धेरै असर पार्छ ... तर म तिमीलाई अन्तिम परिणाम बताउनेछु। बाडेको मा धन्यवाद।
कति राम्रो भेरोनिका! खैर त्यो स्वादमा अलि जान्छ, त्यसैले अधिक मासु थप्न को रूप मा सजिलो। ध्यान दिनुहोस् कि मैले मेरो स्वादमा बढी बाख्रा पनीर थपेको थिएँ ... hehehe। तपाइँको सन्देश को लागी र हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
evamadrilas 26 भन्यो
कस्तो राम्रो !!!! मैले यसलाई टमाटर सलादको साथ खानको लागि बनाएको छु, अर्को पटक म धेरै कीमाले मासु राख्छु! मुरी मुरी धन्यवाद !!!!
Evamadrilas26 लाई जवाफ दिनुहोस्
महान ईवा! तपाईंको टिप्पणीको लागि धन्यबाद। मैले स्वीकार्नु पर्दछ कि यो मेरो मनपर्ने खाना हो। चुम्बनहरू!
फेरेरो चकलेट संग मिनी चीजकेक
आलु टुनाले भरिएको छ